4 puru iche ihu igwe ihe omuma | Netwọk Mgbasa Ozi
na Ihe gbasara ihu igwe adọta uche maka ya spectacity na ya ike mbibi ike ma na onu ogugu ma na okike. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ihe ịtụnanya nke ọtụtụ mmadụ amachaghị na nsonaazụ ya pụrụ iche na ụwa dum.
Next m ga-egosi gị 4 meteorological phenomena ga-eme nọrọ n'ọnụ gị ghe oghe.
1 Àmụmà Catatumbo
2 Towlọ elu Steam
3 Supercell oké ifufe
4 Pearly n'ígwé ojii
Ihe omume a pụtara na mba South America si Venezuela e jikwa nha nke usoro àmụmà fọrọ nke nta nọgidere. Ka ihe ịtụnanya dị otu a wee pụta, achọrọ igwe ojii nwere nnukwu ọ verticalụ nke ga - ewepụta nkwupụta eletrik n'etiti 2 gaa kilomita 10 ruo elu.
Towlọ elu Steam
Na mpaghara Iceland ị pụrụ ịhụ nke a ezigbo ijuanya nke okike, nke pụtara na mgbe ọtụtụ ogidi uzuoku nke na-esite na ụwa esi mmiri, na-ebili n'ikuku na-emepụta ụdịdị dị egwu na nke na-ahapụ ndị ọbịa ka ọnụ ha meghee ọnụ.
Supercell oké ifufe
Oke mmiri ozuzo a di egwu a na-akpọ supercell, na-etolite n'ọnọdụ na-agbanwe agbanwe na ikuku ihe fọrọ nke nta ka ajọ ifufe. Ọ na-adịkarị na Great Plains nke USA, kpọmkwem na mpaghara texas. Anya ọ na-adọrọ mmasị ma na-enwekarị ike mbibi ka ukwuu n'ihi ogologo oge ya.
Pearly n'ígwé ojii
na pearly ojii Ha dị oke egwu maka agba ha mana n'otu oge ahụ ha dị oke egwu ebe ọ bụ na e kere ha nke nitric acid. Yabụ, ha bụ ihe okike mara mma na mbibi nke okike, etolitere ha na stratosphere na ọnọdụ dị ala dị ala n'etiti -50 ogo na -80 ogo.
Ndị a bụ 4 nke ihe omuma meteorology ọmarịcha ọhụụ na ịdị ebube nke emepụtara n’ụwa niile. Enwere m olileanya na ị masịrị ha ma nwee ọmarịcha ihe oyiyi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » 4 ngosipụta ihu igwe pụrụ iche nke okike
Igwe ojii Cirrus, na-achọsi ike dịka ole na ole